Indlwana kaMalusi kunye netubhu eshushu etshiswe ngamaplanga - I-Airbnb
Indlwana kaMalusi kunye netubhu eshushu etshiswe ngamaplanga
Indlu encinci enamavili sinombuki zindwendwe onguBarbara
I-Shepherds Hut ihleli kwiigadi zabucala ezitshanjelwe ecaleni koMlambo i-Weaver kwiLizwe laseCheshire. Ifumaneka kwisiqithi sabucala esinamanye amakhaya ama-4. Ifike kwindlela yabucala kunye nebhulorho.
Hlala kwi-Dutton Locks ecaleni kwe-Dutton Viaduct emangalisayo, i-Dutton Horse Bridge kunye ne-Dutton Sluices, yonke imisebenzi yobunjineli be-19th Century.
Le yindawo ebukekayo, enoxolo, ezele yimbali. Igqwesileyo kwimisebenzi efana ne-angling, ukubukela iintaka, ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, i-kayaking kunye nokuphumla
Ifakwe kwisiqithi esinabamelwane abasondeleyo, i-Shepherds Hut ibonelela ngendawo yokuhlala yabucala yokuphumla ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-2. I-Parallel kwindawo ye-glamping yigadi ezimeleyo kunye nendlu (ehlala abantu aba-4). Ke ngoko ecaleni kokuqeshwa kweNdlwana yoMalusi kukho ithuba lokudibanisa zontathu iipropathi kwiziza ezibini (ezihlalisa ukuya kwiindwendwe ezi-6 zizonke) - Ukufumaneka xa uceliwe.
4.95 · Izimvo eziyi-95
Khusela ukufikelela kwikhowudi engundoqo kwipropati, ukuvumela ukuba ukhangele ngexesha elifanelekileyo kuwe. Sinelungu leqela elihlala ngaphakathi kwemizuzu eyi-15 yokuqhuba le ndawo kwaye ndiya kufumaneka ukuphendula imibuzo ngaphambi nangexesha lokuhlala kwakho ngomnxeba.
Le yindawo entle kakhulu, ejikelezwe ngamanzi, indalo kunye nangaphandle. Ukusuka endlwini unokujonga imijelo emininzi entle, umlambo kunye nezakhiwo zikaloliwe. Inani labo likuLuhlu lweLifa leSizwe laseNgilani kwaye zichongwe kwiBanga lesi-II* izakhiwo ezidwelisiweyo eziquka iDutton Viaduct eyayilwa nguGeorge Stevenson noJohn Locke kwaye yayiyindlela yokuqala kaloliwe yokudlula ngaphandle kweLondon.
Indlu ikwi-Weaver Way, indlela yokuhamba ngeemayile ezingama-40 ubude. Kukho okunye ukuhamba okumnandi kunye namathuba okujikeleza kwindawo. Ungaqalisa amaphenyane kunye ne-kayak phakathi kwe-50m ukusuka kwindlu.
Yeyona ndawo ibalaseleyo yokubukela iintaka enezinto ezininzi ezibonwayo zeentaka ezinqabileyo ezibandakanya iBlack Kite, eneentlobo zeentaka ezingaphezu kwama-70 ezibonwayo.
Kwindawo ohlala kuyo ungandwendwela iWoodland Trust Dutton Park Farm Nature Park kunye nehlathi elimangalisayo leDelamere. IManchester, iLiverpool ifikeleleka lula. Kubantwana, iChester Zoo imalunga nemizuzu engama-20 yokuqhuba kwaye iGulliver's World Theme Park ikufuphi. Kubathengi, i-Cheshire Oaks Designer Outlet kunye ne-Chester City Centre yi-short drive. I-Cheshire izele ziindawo zokutyela ezibalaseleyo kunye nee-pubs. Kukho i-pub enkulu i-Leigh Arms ekupheleni kwendlela, ngobubele obumangalisayo kunye ne-al fresco yokudlela ngasemlanjeni- sincoma kakhulu.
Le yindawo entle kakhulu, ejikelezwe ngamanzi, indalo kunye nangaphandle. Ukusuka endlwini unokujonga imijelo emininzi entle, umlambo kunye nezakhiwo zikaloliwe. Inani labo likuLuh…